MAAL BARANNE?; MAALITTI TARKAANFANNA?, XIINXALA HAALA YEROO-Profesor Solomo Hangashe’tiin! – Beekan Guluma Erena
MAAL BARANNE?; MAALITTI TARKAANFANNA?, XIINXALA HAALA YEROO-Profesor Solomo Hangashe’tiin!	Beekan Erena
Politics Category August 8, 2016
13SHARESKana TamsaasiKana Tamsaasi
Oromoo biyya alaa jiru iraa maaltu eegama? Dirqamni guddaan qabnu ummata biyya keessaatti diina dura dhaabbatee abbaabiyyummaaf falmaa jiru haala qindaawaa fi ittifufiinsa qabuun deggeruudha. Jiruun bor otuu hin ta’in har’a jalqabuu qaba. Garee qabsaawota godiinaalee Oromiyaa keessa jiran wajjiin hariiroo uumuudhaan deggersaa biraan gawuu danda’u godiinaa hundaaf uumuu barbaachisa. Fakkeenyaaf garee godiinaa Arsii Lixaa irratti xiyyeefatee qabsaawota godiina sana jiran wajjin hojjetu. Godiinaalee hafaniifis akkasuma. Akkanaan hojjechuun waa lama gargaara. Tokkoffaa ijaarsiif qabsoo walfakkaataan bakka hundatti akka jajjabaatan taasisa. Lammaffaa godiinaaleen hundi quba walqabaatanii waliin akka socho’an jajjabeessa. Jiruu kana fakkaatu hojjechuuf Oromoon biyya Oromaa jiraatu bakka hundatti walgayii godhachuun itti mariyatee ejjennoo tokkorra gawuu qaba. Walgayii akkanaa qopheessuuf gareen qindeessu tokko dhaabbachuu qaba. Gareen kun karoora baasee walgayiin Hawaasaa Oromoo Ameerikaa Kaabaatti, Auroopaatti, Awstraaliyaatti, Akkasumas Biyya Araabaatti haala walfakkaataa dhaan akka qophaawu taasisa. Ejjeennoon walfakkaatu akka fudhatamu taasisuuf jiruu barbaachisu hojjeta. Dhimma kanarratti Oromoon biyya Ormaa jiraatu mariyachuu qaba.
Yaada Keessan kan toora FB kanaa gadirratti kennaa13SHARESKana TamsaasiKana Tamsaasi
← TARKAANFII ITTI AANU MAALI?-Qabsoon Oromoo Sadarkaa Har’aa kanarra ga’e kun gara kamitti tarkaanfachuu qaba?#OROMO PROTESTS-Via Jawar Mohammed Kabajamtoota ilmaan Oromo,
NAMOOTA AKKA GARBAATTI GURGURAMANII BOODARRA GARA ANGAAWAA MOOTUMMA TA’UUF KAN GAHAN SHANAN! →